Ra'iisal Wasaare Cabdiweli ooka niyad Jabay Joogitaanka xafiiskiisa - Wargeyska Faafiye
Home 2014 November 11 .Warka Ra'iisal Wasaare Cabdiweli ooka niyad Jabay Joogitaanka xafiiskiisa
Ra'iisal Wasaare Cabdiweli ooka niyad Jabay Joogitaanka xafiiskiisa
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Feederaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa ku tilmaamay khilaafka siyaasadeed ee hadda dalka ka jira inuu u baahan yahay in lagu xaliyo wada xaajood iyo is qancin.
Ra’iisul Wasaaraha oo hadalkisa sii wata ayaa yiri “Wax kasta oo khilaaf siyaasadeed ah waxaa haboon in loo maro hab ku dhisan wada xaajood, is qancin iyo u turid dowladnimada curdanka ah ee Soomaaliya.
Ninkii Somaliga ahaa ee dilay gacalisadiisa oo la xukumay .
President says peace is crucial for Somali reconstruction process.
Ciidanka taraafikada oo Afgooye la gaynayo.
Wasiirka beeraha oo la dhaariyay
Abdihakin Br oo tacsi u diray eheladii Marshaale.